Aqoon Yahan Yuusuf Garaad Omar: Madax Dhaqameed La Fara-saaray - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeMaqaaloAqoon Yahan Yuusuf Garaad Omar: Madax Dhaqameed La Fara-saaray
Shiikh Xasan Daahir Aweys oo ka mid ahaa Shabaab ayaa Muqdisho lagu xiray. Buuq ka dhashay xariggisuna waxaa uu sababay in ciidanku ay garaacaan arga-gaxna geliyaan Cuqaal beeleed, Xildhibaanno iyo Wasiirro hore. Arrintaan ayaan qormadeyda ku eegayaa aniga oo ka soo billaabaya markii Xasan Daahir uu tegey Cadaado.
Maamulka Ximan iyo Xeeb waxay mudan yihiin in Dowladdu ay ku ammaanto ugana mahadceliso in Xasan Daahir Aweys oo gacantooda soo galay, ay si nabad ah u wareejiyeen. Waxay ku wareejiyeen akhyaar iyaguna ku ammaanan in ay Xasan Daahir oo qorshayaal kale damacsanaa ay u diidaan fursad aan ahayn in uu iyaga Muqdisho u raaco.
Marka hadday jirto in markii hore ballan loo qaaday Cuqaasha ninkan khasabka ku keenay Muqdisho, waa in loo fuliyaa ballantii lala galay. Ballan baxyadu shakhiga kuma habboona iskaba daa dowlad dhan. Haddaan ballanqaadkaasi jirin Dowladdu waa in ay noo sheegtaa.
Kenya oo Soomaliland u aqoonsatay maamul ka madax banaan Soomaaliya